ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သစ်က နိုင်ငံရေးပါတွေကို စစ်ဆေးမှုနဲ့ တာဝန်ခံမှု မေးခွန်းများ - ข่าวสด
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သစ်က နိုင်ငံရေးပါတွေကို စစ်ဆ...
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သစ်က နိုင်ငံရေးပါတွေကို စစ်ဆေးမှုနဲ့ တာဝန်ခံမှု မေးခွန်းများ
11 ก.ย. 2564 - 23:30 น.
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လက်ခံမယ်လို့ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မဲပေးအပြီးမှာ စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း ၁၀၀ လောက်ကဘယ်လိုဝင်ငွေတွေရနေတယ်၊ ပါတီဝင်တွေဘယ်လောက်ရှိနေပြီး၊ ဘယ်လို ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိကာ၊ ဘယ်သူတွေကပါတီအတွက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းနေကြလဲ ဆိုတဲ့အချက်အလက် တွေကို အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဦးသိန်းစိုး ဦးဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်က စစ်ဆေးနေပါတယ်။ အခုလိုစစ်ဆေးတာမျိုးကလည်း မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပါတီတစ်ခုရဲ့စာရင်းတွေကို စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ရင် ကော်မရှင်က စစ်ဆေးနိုင်တယ်။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့် ကိုလည်း စစ်ဆေးနိုင်တယ်၊ အဲဒီလိုစစ်ဆေးရင်လည်း ကော်မရှင် ဒါမှမဟုတ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတွေထံက အကူအညီရယူနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအရ လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က စစ်ဆေးတာလို့ ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေက ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ မတ်လမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက လတ်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဥပဒေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဥပဒေအရ ပါတီဖွဲ့စည်းပုံအင်အား၊ ပါတီဝင်ငွေ၊ ပါတီကိုလှူဒါန်းငွေ၊ ပါတီပိုင်လုပ်ငန်းတွေ၊ ပါတီနှစ်စဉ် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း၊ ပါတီပိုင်ပစ္စည်းတွေ စတဲ့အချက်တွေအပါအဝင် အချက်ပေါင်း ၂၀ ကို စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ပြည်ထဲရေးနဲ့ စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ စစ်ဆေးတာပါ။
အဲဒီလိုစစ်ဆေးမှုတွေအပေါ် နိုင်ငံရေး ပါတီအများစုကတော့ သဘောမတွေ့လှသလို၊ ဝေဖန်တာတွေရှိသလို၊ စစ်ဆေးမခံခဲ့ရင်လည်း စစ်တပ်ရဲ့ဖိအား ပေးမှုတွေရှိလာမှာကို စိုးရိမ်နေကြတာတွေလည်း အများအပြားရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတာကြောင့် ပါတီတွေအခြေစိုက်ရာ တိုင်းတွေကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင်က တာဝန်ရှိသူတွေက သွားရောက်စစ်ဆေးကြဖို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာအခြေစိုက်တဲ့ပါတီ ၄ခုရှိပြီး၊ ရန်ကုန်မှာအခြေစိုက်တဲ့ပါတီက ၄၀ကျော်နဲ့ ကျန်တဲ့ပါတီတွေက တော့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေနဲ့ တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာ အခြေစိုက်တဲ့ပါတီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ်လလယ်လောက်ကစလို့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ အမျိုသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက် တစ်ပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ နေပြည်တော်အခြေ စိုက်ပါတီ ၄ ခုကို စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက စတင်စစ်ဆေးနေပါတယ်။
အဲဒီလေးပါတီထဲမှာတော့ ပါတီတချို့လည်း စစ်ဆေးပြီးစီးသွားပြီး တစ်ချို့ကတော့ ဆက်လက်စစ်ဆေးခံနေရ ဆဲပါ။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီတွေအပေါ် စစ်ဆေးတာက လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေ အရ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအပါအဝင် အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအပေါ် ထိန်းချုပ်လိုတာအပြင် ဖျက်သိမ်းနိုင်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်တာလို့ နိုင်ငံရေးပါတီ အချို့နဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေ ကတော့ ဝေဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်။
အခုလိုအသေးစိတ်အချက်အလက်မျိုးတွေကို စစ်ဆေးတာက ကာလရှည်စွာရပ်တည်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ တွေအတွက်တော့ အခက်အခဲဖြစ်နိုင်ပေမယ့် မကြာခင်က ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအတွက် အခက်အခဲနည်းနိုင်မယ်လို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတော့ ယူဆထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အာဏာသိမ်းပြီးကစလို့ အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်ကန့်ကွက်မှုမရှိဘဲ၊ အိမ်စောင့်အစိုးရဖွဲ့တာ၊ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတာကို ထောက်ခံချက်တွေ ထုတ်ပြန်ထောက်ခံနေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအပေါ်တော့ တစ်စုံတစ် ရာအခက်အခဲရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ယူဆ ပြောဆိုကြပါတယ်။
ဦးသိန်းစိုးရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို အခုလိုစစ်ဆေးတာက ဖောင်းပွနေတဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီကို စိစစ်ကြပ်မတ်ချင်တာကြောင့်လုပ်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အာဏာသိမ်းပြီး ကော်မရှင်စဖွဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကော်မရှင်တို့ တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်တွေမှာ တုန်းကလည်း နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တူသူ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းသင့်တယ်လို့ ဦးသိန်းစိုးက ပြောခဲ့ဖူးတယ်လို့ နိုင်ငံရေးပါတီ တချို့က ဘီဘီစီကို ပြောပြကြပါတယ်။
အဲဒီအပေါ်ကိုလည်း နိုင်ငံရေးပါတီအများစုကတော့ လက်မခံနိုင်ကြပါဘူး။ ပါတီစုံဒီမိုကစေရစီစနစ်မှာ နိုင်ငံရေး ပါတီများတာ၊နည်းတာထက် ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံနှုန်းတွေအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့သာ အဓိကဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးရေချိန်ပေါ်မူတည်ကာ ပါတီတွေရဲ့ရပ်တည်မှုကလည်းပြောင်းလဲလာမှာလို့ အများစုက လက်ခံကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေအပေါ်ကို အခုလိုစစ်ဆေးရတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောထားတာမရှိပါဘူး။ ဥပဒေ အရစစ်ဆေးတာလို့ပဲ ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။
"တိုင်းပြည်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားပေါ့ဗျာ၊ ရန်သူမှန်သမျှအကုန်သတ်တယ် ဟေ့ဆိုရင်တော့၊ ဖြစ်ပါ့မလား၊ နိုင်ပါမလား၊ သတ်နိုင်ပါ့မလား၊ နောက်တုံ့ပြန်မှုတွေ ဘာဖြစ်မလဲ စဉ်းစားပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်းပဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့ လိုတယ်လေ" လို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ စိုင်းညွန့်လွင်က နိုင်ငံရေးပါတီတွေအပေါ်အခုလို ပစ်မှတ်ထားစစ်ဆေးမှုအပေါ် မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
တိတိကျကျ အရေးယူမှု ဘယ်လောက်ရှိမလဲလို့ မွေးခွန်းထုတ်တဲ့ ဦးကိုကိုကြီး
လက်ရှိစစ်ဆေးရာမှာလည်း နိုင်ငံရေးပါတီဝင်တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း အတိအကျကစလို၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ဝင်ငွေတွေ၊ လှူဒါန်းသူတွေရဲ့ ဝင်ငွေရလမ်းမျိုး၊ ငွေဖြူငွေမဲစတဲ့အချက်မျိုးတွေအပြင် တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေ ရဲ့ အဓိကအချက်အလက်မျိုးတွေကို စစ်ဆေးတာမျိုးရှိတယ်လို့ လက်ရှိစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ ပါတီတွေထဲက အမည်မဖော်လိုသူတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကစလို့ စစ်ဆေးပြီး အဲဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ တွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ကို စစ်ကောင်စီဘက်က လုပ်နေတာလို့လည်း နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကလည်း ဝေဖန်ကြပါတယ်။
"စစ်တပ်ပေါ်မှာလည်း နဂိုကတည်းက အမြင်က အနိမ့်ဆုံးကို ရောက်နေတာ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေက နိုင်ငံရေး နည်းလမ်း ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထဲမှာ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေး ဖက်ဒရယ် အရေးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကိုပါ ဖျက်ဆီးသလို ဖြစ်လာရင်တော့ အဲဒါတာဝန် ရှိတယ်၊ အင်မတန်အန္တရာယ်ရှိတယ်" လို့ ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဌ ဦးကိုကိုကြီးက ပြောပါတယ်။
"တကယ်ကျူးလွန်နေတဲ့ ပါတီတွေအပေါ် တိတိကျကျအရေးယူမှာလား"
နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းတွေကို တိုက်ရိုက် ဒါမှမဟုတ် သွယ်ဝိုက်သုံးစွဲတာ၊ ပြည်ပကနေ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ယူတာ၊ တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်တာ၊ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအသုံးချတာမျိုးတွေလုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလည်း အခုလိုစစ်ဆေးမှုတွေမှာ တကယ်ကျူးလွန်နေတဲ့ပါတီတွေအပေါ် တိတိကျကျအရေးယူမှာလားလို့လည်း ဦးကိုကိုကြီးက မေးခွန်းထုတ် ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတချို့မှာလည်း ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံစတာတွေကို ရယူသုံးစွဲပြီး ပါတီပိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းရှိနေတာကြောင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကစလို့ အဲဒီအပေါ်မှာလည်း အမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုလာတာ ဒီကနေ့အထိလည်း ရှိနေဆဲပါ။
ဒါကြောင့်လည်း အရေးပေါ်ကာလမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖြစ် တာဝန်ယူရတဲ့သူတွေက အခုလို နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို စစ်ဆေးတာလုပ်တဲ့အပေါ်လည်း ဘယ်လောက်မှန်ကန်အောင် လုပ်နိုင်မလဲလို့မေးခွန်း အများစုက ထုတ်နေကြပါတယ်။
အာဏာရဖူးတဲ့ ပါတီနှစ်ခု ကျော်ဖြတ်သွားမှာလား
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလ ရန်ကုန်မြို့က ပါတီကြီးနှစ်ခုရဲ့ ထောက်ခံသူတွေ
အဲဒီလိုစွပ်စွဲမှုတွေ ဝေဖန်ခံရမှုတွေအများဆုံးရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုတော့ စစ်ဆေးနေ တဲ့အခြေအနေကို သိရှိနိုင်အောင်၊ စစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးမှုရှိမရှိစတာတွေမေးမြန်းဖို့ ရက်သတ္တပတ်လောက် ကြို တင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့် ဖြေကြားနိုင်သူမရှိသေးတာရယ်၊ ဖြေကြားနိုင်ခွင့် ခွင့်ပြုချက်မျိုးမရရှိတာ ကြောင့် ဘီဘီစီအနေနဲ့ မမေးမြန်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ပြည်ထဲရေးနဲ့ စီမံဘဏ္ဍာကကအရာရှိတွေ ဦးဆောင်စစ်ဆေးတဲ့နေရာကိုတော့ အရင်မီးရထားဝန်ကြီး၊ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးလည်းဖြစ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေးကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး သွားရောက် စစ်ဆေးခံခဲ့တာလို့ နိုင်ငံရေးပါတီအသိုင်းအဝန်းကသိရ ပါတယ်။
အလားတူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီက ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကို စစ်ကောင်စီဘက်က ဖမ်းဆီးထား တာမျိုးတွေကြောင့်နဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဆက်သွယ်မှုအစရှိတဲ့စွပ်စွဲမှုတွေကြောင့် NLD ဘက်ကို မေးမြန်းနိုင်ခြင်း တော့မရှိခဲ့ပါဘူး။
NLD ပါတီ ဖျက်သိမ်းဖို့ ကော်မရှင်ကြိုးပမ်းမှုကို တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲ
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သစ်က နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ဖိတ်ကြား
လက်ရှိကာလမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အာဏာရခဲ့တဲ့ပါတီကြီးတွေရဲ့ ရပ်တည်မှုတွေအပေါ်ပြည်သူလူထုက သေချာနားလည်သိရှိထားတာကြောင့် နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ရယူခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေက စစ်ဆေးမှုတွေ ကို အောင်မြင်အောင် ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ စစ်ဆေးသူတွေနဲ့ စစ်ဆေးတဲ့ရလဒ်အပေါ် လူထုက လုံး ဝလေးစားမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဒေါက်တာစိုင်းကြည်ဇင်စိုးက သုံးသပ်ပါတယ်။
"မြင်သာနေတဲ့ဟာက စစ်အုပ်စုအိမ်စောင့်အစိုးရက သူသွားချင်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကို ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေ ကို နှိပ်ကွပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ ငြင်းမရဘူး…မြင်နေရတဲ့ သာဓကအရ အခုလိုစစ်တာဆေးတာ ဆိုတော့ သူရဲ့ (စစ်တပ်) ဥပဒေစံနှုန်းတွေထက် ကိုက်ညီတာရှိမရှိကို သိချင်တာထက် သူ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာရှိ နေတဲ့ အစုအဖွဲ့တွေကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ပြီး နိမ်နှင်းဖို့၊ တားဆီးဖို့ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လို့ပဲ မြင်တယ်" လို့ ဒေါက်တာစိုင်းကြည်ဇင်စိုးက သဘောထားမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
လက်ရှိပါတီတွေကို စစ်ဆေးနေတဲ့ ကော်မရှင်ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ စစ်ကောင်စီခန့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိုးကလည်း ကြိုတင်မဲတွေနဲ့ အငြင်းပွားမှုအများဆုံးရှိခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကြီးကြပ်ခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမတိုင်မီကတော့ ဦးသိန်းစိုးက တပ်မတော်စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ် ၁၆ ကနေ တပ်မတော်အရာရှိဖြစ်ခဲ့ပြီး တော့ တပ်မ ၇၇ တပ်မမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူပါ။ အထက်တန်းရှေ့နေသင်တန်းကိုလည်း တက်ရောက် အောင်မြင်ထားသူဖြစ်တာကြောင့် ၁၉၉၆ ခုနှစ် လောက်မှာ စစ်ဥပဒေချုပ်ရာထူးကိုလည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ လက်ထက်မှာပဲ နိုင်ငံတော် ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ်အထိ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် မတိုင်မီမှာတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တာဝန်ယူ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်လာတဲ့အခါမှာတော့ သူက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အခုတော့ အာဏာသိမ်းထားတဲ စစ်တပ်က ပြန်ခန့်လို့ စစ်အာဏာသိမ်းကာလရဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပြန်လည်နေရာရလာပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို စစ်ဆေးမှုတွေကိုပထမဆုံး လုပ်ခဲ့သူ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သစ်က နိုင်ငံရေးပါတွေကို စစ်ဆေးမှုနဲ့ တာဝန်ခံမှု မေးခွန်းများ